Xiddig hore kooxda Manchester United ah oo fariin adag u diray Paul Pogba – Gool FM
Xiddig hore kooxda Manchester United ah oo fariin adag u diray Paul Pogba
Dajiye July 6, 2021
(Manchester) 06 Luulyo 2021. Xiddigii hore Manchester United ee Paul Ince ayaa sheegay in Paul Pogba ay tahay inuu qandaraas waqti dheer u saxiixo Red Devils ama uu si dhaqso ah uga tago xagaagan.
28 jirkaan reer France ayaa qandaraaskiisa kooxda Manchester United wuxuu dhacayaa xagaaga soo aadan, kaddib wuxuu xor u noqon doonaa inuu u dhaqaaqo koox kale.
Paul Pogba ayaa in ka badan hal jeer sheegay in mudadii uu la joogay Juventus ay ahayd waqtigiisii ​​ugu fiicnaa xirfadiisa ciyaareed, iyada oo ay jiraan warar tilmaamaya inuu doonayo inuu mar kale ku laabto Bianconeri.
Haddaba shabakada “Goal” ayaa shaacisay wareysi uu bixiyay halyeeyga kooxda Manchester United ee Paul Ince, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Pogba ma uusan u saxiixin qandaraas cusub kooxda Manchester United, mana ogin waxa maskaxdiisa ku jira.”
“Haddii uu go’aansado inuu sii joogo, waa inay u soo bandhigaan shan sano, maadaama aadan ka hadli karin xagaa walba suurtogalnimada aad uga tagi karto kooxda.”
“Haddii aad sii joogi doonto oo aad ballan qaadi doonto, waa inaad qof walba tustaa inaad tahay ciyaaryahan heer sarre ah, haddii aad go’aansato inaad ka tagto kooxda, markaas United waa inay isla markiiba ku iibisaa xagaagan.”
Booliska Talyaaniga oo u yeeray xiddiga Kooxda Roma ee Stephan El Shaarawy kaddib markii uu garaacay Tuug doonayay inuu xado Baabuurkiisa Lamborghini-ga ah!
Rio Ferdinand oo kashifay sir xiiso badan oo ku saabsan xiddiga Liverpool ee Thiago Alcântara